Myanmar Property | Lotaya Property
Lastest Myanmar Property List
Code/121-5919 #Paya Garden Residence for rent Condo unit for rent in Kamayut Township. Pyay Road 1290Sqft 8th floor 1 Master and2Single bedrooms Air cons / Fridge / Washer / … . Fully furnished Ready to move … 🚡 Lift 🏊 Pool 👨‍✈️ Security 🚘 Parking 🛢 Generator Rental Price - U$2250 per month(1year agreement contract) We take agent fee. Pls let us know about this ad code. "Shwe Myanmar Property real estate'' ☎09 5036616(Viber,WhatsApp,LINE) 0995 5036616(Viber,WhatsApp,LINE) ...
- Shared by Shwe Myanmar Property Real Estate Read More
Code/120-5919 ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ် လုံးချင်းအရောင်း သွားလာရေးလွယ်ကူအဆင်ပြေသောနေရာ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ပြည်ထောင်စုလမ်း၊ဆရာစံလမ်း များအနီးဝန်းကျင် ၄၂'×၆၆'(မြေအကျယ်)၊ အိမ်၃၃'×၄၄'(2RC) - ဂရမ်မြေ(SP) မြောက်ဘက်အလှည့် -3Master and 1 Single Bedrooms - 1 Maid Room - ပါကေးခင်း/ကြွေပြားခင်း - Air cons/Water Heater - Fire Alarm/Fire Extinguisher & Fire Hose/.. - Pressure Pump/.. - Overhead Fiber Water Tank (500Gallons) - Underground Water Tank (1400Gallons) - 15KVA Transformer/Remote Control Gate/… - ခြံထဲတွင်ကား ၃စီး ထားလို့ရသည် ရောင်းဈေး.....၃၃၅၀သိန်း #ပိုင်ရှင်နှင့်တိုက်ရိုက်ဈေးစကားဆွေးနွေးနိုင်ပါသည် Pls let us know about this ad code. Shwe Myanmar Property real estate ☎09 5036616(Viber,WhatsApp,LINE) 0995 5036616(Viber,WhatsApp,LINE) ...
Golden Royal Sayarsan Condo for rent #2300USD Located in Sayarsan Lane, near Sayarsan Road and U Chit Maung Road,5mins drive to Myanmar Plaza, many international restaurants in this area, Bahan Township, Yangon. - 1900 Sqft -2Master Bedrooms with bathtub - 1 Single Bedroom - High Floor - Fully Drcorated - Fully Furnished ( If you need some furnitire owner will provide ) - Verandah 1 - Roof Top Swimming Pool - Gym - BBQ area - Generator Backup for lift and public area - 24hr Security - Carparking Rental Price - 2300 USD ( nego ) Ph - 09779771193 Ph - 0943077610 ( viber and whatsapp ok) Ph - 09420718183 Ph - 09697999979 I have many apartments, condo, land and house, warehouse, land only , office ,ground floor for your business and etc..... So, please contact me if you need anything. #I-will-take-agent fee.😊😊 https://www.facebook.com/myatsupan.realestate/ ...
- Shared by မြတ်ဆုပန် အိမ်၊ခြံ၊မြေ အကျိုးဆောင် Read More
🏵ရန်ကင်းကွန်ဒိုအရောင်း/အငှါး🔶🔷🔶🔷 ✴ရွှေသစ္စာကွန်ဒို✴ 🕹🕹🕹🕹🕹🕹🕹 ရန်ကင်း/သစ္စာလမ်းသွယ်(သစ္စာလမ်းကပ်ရက်/မိုးကောင်းလမ်းအနီး/ရန်ကင်း 🕹🕹🕹🕹🕹🕹🕹 ⏺1700 sqft ⏺6fl ⏺2mbr/2sbr ⏺5AC ⏺ကျွန်းပါကေးခင်းကြွေပြားကပ်ပြင်ဆင်ပြီး ⏺အရှေ့လှည့် ⏺Lift/generator/transformer/ Security/carparking 🛑🛑 အရောင်း**1700 သိန်းညှိ 🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸 အိမ်ခြံမြေ၊ကွန်ဒို၊တိုက်ခန်း၊လုံးချင်း၊စက်မှုဇုံတို့အား (ရောင်း၊ဝယ်၊ငှား)ဝယ်လိုရောင်းလိုငှားရမ်းအပ်နှံလိုပါက မိမိတို့ 🏨ပြည့်စုံ(YANGON HOUSE)🏨 အိမ်ခြံမြေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းထံသို့တိုက်ရိုက်မေးမြန်းစုံစမ်းအပ်နှံနိုင်ပါပြီ ▪အိမ်ကြည့်လိုပါက(၁)ရက်ကြိုတင်ချိန်းဆိုပေးပါရန်▪▪ 📞 095034253 (Viber) 09258888680(viber) 09788089998(viber) 09790888955 09959833338 09951505388 ...
- Shared by ကွန်ဒိုအရောင်း/အငှားသီးသန့် Read More
#ဈေးတန်လုံးချင်းအရောင်း • ရန်ကုန်မြို့ • ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ် • (၃၁)ရပ်ကွက် -ဆရာစံလမ်းမကျောကပ် -ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီးတည့်ပေါက် -ပင်လုံအိမ်ရာ မျက်နှာချင်းဆိုင် • (42'✖️66') အိမ်အကျယ် (33'✖️44') (2900 - Sqft) • (၂) ထပ် R.C.C (လူမနေရသေးသောတိုက်သစ်) • နှစ်(၆၀)ဂရမ် (S.P ယူထားသည်။) • Air-Con • Double Master Bedroom (3)ခန်း • Single Bedroom (1)ခန်း • Maid room (1) ခန်း (စုစုပေါင်းအိပ်ခန်း ၅ ခန်း) • ဧည့်ခန်းကျယ် • ဘုရားခန်း • ထမင်းစားခန်း • မီိးဖိုခန်း • စတိုးခန်း • ရှေ့ဝရမ်ဒါ (၂ )ခု • ရေချိုးခန်း/သန့်စင်ခန်း (၅) ခန်း • Internet Line( Wi-Fi ) • Thailand Made ( Bathtub များ ၊ ဘိုထိုင်များ ၊ ဘေစင်များ ၊ Rain Shower များ ၊ Hand Shower များ) • အပေါ်ထပ်+ အောက်ထပ် (ကျွန်းပါကေး ပေါင်းသားများခင်းကျင်းထားပါသည်။) • ကြွေပြားများ ခင်း/ကပ် ထားသည်။ • ဆန်းသစ်လှပ ခေတ်မီိသောမျက်နှာကြက်ဒီဇိုင်းများ • 15 KVA, Transformer (1) လုံးတပ်ဆင်ထားသော်လည်း မီးအဝင် (220) အပြည့်ရှိသည်။ • ...
- Shared by Ko Htet အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် လုပ်ငန်း Read More
Shwe Moe Kaung Condo for rent #1400USD Located in corner of Aung Zaya Road and Moe Kaung Pagoda Road,5mins drive to Myanmar Plaza and near many restaurants, Yankin Township, Yangon. - 1500 Sqft -2Master Bedrooms - 1 Single Bedroom - 3rd Floor and 4th Floor - Fully and nice decorated - Owner will provide brand new fully furnished - Lift card system - Carparking - You can use Swimming Pool and Gym November 2019. - 24hr Generator Backup Rental Fee - 1400 USD ...
#ဈေးနှုန်းသင့် လုံးချင်းအရောင်း #Housing For #Sale #တောင်ဥကလာပမြို့နယ် #ချယ်ရီဥယျာဉ်အိမ်ရာ #သံသုမာလမ်းမအနီး -30x60 -2RC -2Master Room -2Singel Room -ပါကေးခင်း -ပြင်ဆင်ပြီး -ဂရံအမည်ပေါက် #ဈေးနှုန်း 2950 သိန်း Myanmar Property Real Estate #kohtet အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် လုပ်ငန်း 09 777969010 09 777969020 09 423675387(Viber) သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည် ...
* ​ဈေးနှုန်းတန်​တန်​ ​နေရာ​ကောင်း လုံးချင်းအိမ်​နှင့်​​မြေ အမြန်​​ရောင်းမည်​ *
* ​ဈေးနှုန်းတန်​တန်​ ​နေရာ​ကောင်း လုံးချင်းအိမ်​နှင့်​​မြေ အမြန်​​ရောင်းမည်​ * ___________________________________________________________ 1. သဃက၊ VIP(1) (100x100) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​RC2 (1Sqft- 1.3သိန်း) ​​​​​​​​​​ 2. ဗဟန်း၊ အင်းယားမြိုင်​လမ်းမ (5200Sqft) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​မြေ (17990သိန်း) 3. တ/ဥ၊ ရတနာလမ်းမ (40x60) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​RC1 (9500သိန်း) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 4. သဃက၊ သုမင်္ဂလာအိမ်​ရာ (80x80) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​RC2 (8990သိန်း) 5. ရက၊ ​ဘောက်​​ထော်​ (60x60) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​မြေ (7990သိန်း) 6. ရက၊ ပါရမီရိပ်​သာ (25x90) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​မြေ (4700သိန်း) ​​​​​​​​​ ** ​မြေကွက်​၊ လုံးချင်း၊ Condo၊ တိုက်​ခန်းများအား ပိုင်​ရှင်​များကိုယ်​တိုင်​ ဆက်​သွယ်​အပ်​နှံ​ပေးပါရန်​ ဖိတ်​​ခေါ်အပ်​ပါသည်​ ** Mobile - 09799991090,09799991092,09799991095 Viber - ...
- Shared by ယုန်မိသားစု အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီ Read More
🙏🏻 Sept လရဲ့ ဒုတိယမြောက် ရဲမွန်တောင် ( ၂ ) ကွက်တွဲ မင်္ဂလာဖြစ်ခြင်း 🙏🏻
🙏🏻 Sept လရဲ့ ဒုတိယမြောက် ရဲမွန်တောင် ( ၂ ) ကွက်တွဲ မင်္ဂလာဖြစ်ခြင်း 🙏🏻 🌸 ရောင်းသူ ၊ ဝယ်သူ Customer များအား 🌸 🏠 ရွိုင်ရယ်ထွန်းသစ္စာအိမ်ခြံမြေမှ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်🏠 🏠 အိမ်ခြံမြေ နှင့်ပတ်သက်လျှင် ရွိုင်ရယ်ထွန်းသစ္စာအိမ်ခြံမြေကို စိတ်ချယုံကြည်စွာအပ်နှံနိုင်ပါပြီ 🤝 💯 တိကျမှန်ကန် မြန်ဆန်တာ ရွိုင်ရယ်ထွန်းသစ္စာ 💯 📞 09 20 60 465 09 96 20 60 465 09 76 20 60 465 09 78 20 60 465 ...
- Shared by Mandalay Real Estate Read More
🇬🇧🇬🇧**English Language describe below..., Condo For Rent.⤵️⤵️
🇬🇧🇬🇧**English Language describe below..., Condo For Rent.⤵️⤵️ 🎉🎉** ဗဟန်းမြို့နယ်၊ Dawn Condo တွင် အခန်းငှားမည်။ **🎉🎉 * ဈေးနှုန်း - US 1500(ညှိနှိုင်း)💰💰 * အကျယ်အဝန်း - 1450 Sqft ပါဝင်သော Condo Facilities.. _ မာစတာအိပ်ခန်း(၁)ခန်း🛌🛌 _ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၂)ခန်း _ အဲကွန်း(၄)လုံး _ ရေကူးကန် _ ဂျင် _ မီးစက် _ Lift _ ကားပါကင် _ ပရိဘောဂအပြည့်အစုံ ♦️ သွားလာရလွယ်ကူပြီး International School/Hospital တို့အနီးအနားတွင်တည်ရှိပါသည်။ ♦️Market Place သို့ (10) မိနစ်လမ်းလျှောက်ရုံဖြင့်ရောက်ရှိနိုင် ပါသည်။ ( CR-047668) 👇👇 အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ်လေးနှိပ်ပြီး ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ 👇👇 ☎️☎️☎️Tel : 09- 5148486/09-785148486/01-9317833 📞📞 24 Hour Hot Line : 09- 450058012 🌐🌐 Website : www.goldenpeacockmm.com ◾️◾️ #GoldenPeacockRealEstate ## ----------------------------------------------------------------------------- 🎉🎉** Dawn Condo For Rent In Bahan ...
- Shared by ရွှေဥဒေါင်းမင်း အိမ် ၊ ခြံ ၊ မြေ Read More
🎉🎉** မြို့နယ်စုံရှိ ပြင်ဆင်ပြီးသား အခန်းကျယ် Mini Condo အရောင်းစာရင်းများ.. **🎉🎉
🎉🎉** မြို့နယ်စုံရှိ ပြင်ဆင်ပြီးသား အခန်းကျယ် Mini Condo အရောင်းစာရင်းများ.. **🎉🎉 1. ကမာရွတ်၊ ရတနာလမ်း ပေ(25×50) Master bedroom 1, Normal bedroom 1, Air-cons 3, ပါကေး, Lift သိန်း 1200(ညှိနှိုင်း) ( CS-039550) 2. စမ်းချောင်း၊ မြေနီကုန်းဈေးလမ်း ပေ(16×60) Master bedroom 1, Normal bedrooms 2, ပါကေး, Lift သိန်း 1280(ညှိနှိုင်း) ( CS-047645) 3. ကြည့်မြင်တိုင်၊ ဥယျာဉ်လမ်း 1250 Sqft Master bedroom 1, Normal bedroom 1, ပါကေး, Lift သိန်း 1350(ညှိနှိုင်း) ( CS-047528) 4. သင်္ဃန်းကျွန်း၊ သံသုမာလမ်းမ ပေ(19×54) Master bedroom 1, Normal bedroom 1, Air-cons 3, ပါကေး, Lift သိန်း 1350(ညှိနှိုင်း) ( CS-047511) 5. ကမာရွတ်၊ ရွှေကွန်း Condo ပေ(20×60) Hall, RC ခင်း, Lift သိန်း 1400(ညှိနှိုင်း) ( CS-047020) 6. ပုဇွန်တောင်၊ (၅၅)လမ်း ပေ(25×60) Hall, RC ခင်း, Lift သိန်း 1600(ညှိနှိုင်း) ( CS-047584) 7. လသာ၊ (၁၇)လမ်း ပေ(25×50) Master bedroom 1, RC ခင်း, Lift သိန်း ...
🇬🇧🇬🇧**English Language describe below..., Condo For Rent.⤵️⤵️ 🎉🎉** ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ Grand ဆရာစံ Condo တွင်အခန်းငှားရန်ရှိပါသည်။ **🎉🎉 * ဈေးနှုန်း - US 1300(ညှိနှိုင်း)💰💰 * အကျယ်အဝန်း - 1550 Sqft ပါဝင်သော Condo Facilities.. _ မာစတာအိပ်ခန်း(၁)ခန်း🛌🛌 _ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၂)ခန်း _ အဲကွန်း(၄)လုံး _ ပါကေး _ ရေကူးကန် _ ဂျင် _ Lift _ ကားပါကင်🚗🚗 _ မီးစက် ☑️သွားလာရလွယ်ကူပြီး နေထိုင်ရန်ကောင်းသောနေရာ။ ☑️ ရန်ကင်းစင်တာနှင့် မြန်မာပလာဇာသို့ မိနစ်အနည်းငယ် လမ်းလျှောက်ရုံဖြင့်ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ ( CR-045879) 👇👇 အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ်လေးနှိပ်ပြီး ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ 👇👇 ☎️☎️☎️Tel : 09- 5148486/09-785148486/01-9317833 📞📞 24 Hour Hot Line : 09- 450058012 🌐🌐 Website : www.goldenpeacockmm.com ◾️◾️ #GoldenPeacockRealEstate ## ----------------------------------------------------------------------------- 🎉** Grand Sayar San Condo For Rent In ...
🔥Congratulations Henry for being Projects Top Sale of the month of July to August!🥳
🔥Congratulations Henry for being Projects Top Sale of the month of July to August!🥳 🔥Congratulations Bruce for being Rental Top Sale & Hit Triple Target of the month of August!🥳 🤩We are proud to represent you as our Top Sales list and Keep up the awesome works!💪💪💪 ...
- Shared by Your Property Finder Real Estate Agency Yangon Myanmar Read More
ကျွန်​​တော်​များ ``ယုန်​မိသားစု အိမ်​ခြံ​မြေ´´ကုမ္ပဏီတွင်​ ​အောက်​ပါမြို့နယ်​စုံရှိ လုံးချင်း/​မြေကွက်​များအား ဝယ်​ယူလို​သော ဧည့်​သည်​များရှိပါသဖြင့်​ ပိုင်​ရှင်​လူကြီးမင်းများကိုယ်​တိုင်​ ယုံကြည်​စိတ်​ချစွာ အပ်​နှံ​ပေးပါရန်​ ​လေးစားစွာ ဖိတ်​​ခေါ်အပ်​ပါသည်​။
ကျွန်​​တော်​များ ``ယုန်​မိသားစု အိမ်​ခြံ​မြေ´´ကုမ္ပဏီတွင်​ ​အောက်​ပါမြို့နယ်​စုံရှိ လုံးချင်း/​မြေကွက်​များအား ဝယ်​ယူလို​သော ဧည့်​သည်​များရှိပါသဖြင့်​ ပိုင်​ရှင်​လူကြီးမင်းများကိုယ်​တိုင်​ ယုံကြည်​စိတ်​ချစွာ အပ်​နှံ​ပေးပါရန်​ ​လေးစားစွာ ဖိတ်​​ခေါ်အပ်​ပါသည်​။ (1) တ/ဥမြို့နယ်​အတွင်းရှိ _______________________ > ​ဝေဇယန္တာလမ်းမနှင့်​ လမ်းသွယ်​များ > ​မေတ္တာလမ်း၊ ဗြဟ္မစိုရ်​လမ်း၊ သစ္စာလမ်း၊ ရတနာလမ်း > သုမင်္ဂလာလမ်းမနှင့်​ လမ်းသွယ်​များ > သံသုမာလမ်းမနှင့်​ လမ်းသွယ်​များ > (3)(6)(9) ရပ်​ကွက်​အတွင်းရှိ လုံးချင်း​မြေကွက်​များ (2) ​မြောက်​ဒဂုံမြို့နယ်​အတွင်းရှိ ________________________ > ပင်​လုံလမ်း၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ပြည်​​ထောင်​စုလမ်း၊ ဗိုလ်​မူးဗထူးလမ်း > သစ်​​တောရပ်​ကွက်​အတွင်းရှိ​မြေကွက်​များ > (35)(36)(37)(29)(30)ရပ်​ကွက်​​အတွင်းရှိ​မြေကွက်​များ > ​ရွှေပင်​လုံအိမ်​ရာအတွင်းရှိလုံးချင်း​မြေကွက်​များ Mobile - 09799991090, 09799991092, 09799991095 Viber - 09253251133 Gmail - ...
Yangon Construction Permit registration can be done within 45days to those who register online.
Yangon Construction Permit registration can be done within 45days to those who register online. #TS1PropertyService CRD- Myanmar Builders Guide ...
- Shared by TS1 Property Services Read More
🤗🤗** ယခုတင်ထားသော Post မှ နံပါတ်(1) စမ်းချောင်းမြို့နယ် သံတံတားလမ်း အခန်းလေးအရောင်းထွက်သွားပါပြီ။ ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းရောင်းချပေးပါသော အိမ်ရှင်နှင့်
🤗🤗** ယခုတင်ထားသော Post မှ နံပါတ်(1) စမ်းချောင်းမြို့နယ် သံတံတားလမ်း အခန်းလေးအရောင်းထွက်သွားပါပြီ။ ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းရောင်းချပေးပါသော အိမ်ရှင်နှင့် ရွှေဥဒေါင်းမင်းအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်အား ယုံကြည်စွာဝယ်ယူအားပေးသော Customer လူကြီးမင်းများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါသည်။ **🤗🤗 ...
🇬🇧🇬🇧**English Language describe below..., Condo For Rent.⤵️⤵️ 🎉🎉** ရုံးခန်းဖွင့်ရန်သင့်တော်သော Luxury Condo အငှားစာရင်းများ..**🎉🎉 1. မရမ်းကုန်း၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း မြတ်စုမွန် Condo 1450 Sqft Master bedroom 1, Normal bedrooms 2, Air-cons 4, ကားပါကင် 10 သိန်း(ညှိနှိုင်း) ( CR-048534) 2. ရန်ကင်း၊ မိုးမြင့်စံ Condo 1350 Sqft Master bedroom 1, Normal bedrooms 2, Air-cons 3, ပရိဘောဂအပြည့်အစုံ 15 သိန်း(ညှိနှိုင်း) ( CR-048523) 3. အလုံ၊ ရဲတံခွန် Tower 1800 Sqft Master bedroom 1, Normal bedrooms 2, Air-cons 5, ပါကေး 17 သိန်း(ညှိနှိုင်း) ( CR-048538) 👇👇 အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ်လေးနှိပ်ပြီး ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ 👇👇 ☎️☎️☎️Tel : 09- 5148486/09-785148486/01-9317833 📞📞 24 Hour Hot Line : 09- 450058012 🌐🌐 Website : www.goldenpeacockmm.com ◾️◾️ #GoldenPeacockRealEstate ...
ကျွန်​​တော်​များ ``ယုန်​မိသားစု အိမ်​ခြံ​မြေ´´ကုမ္ပဏီတွင်​ ​အောက်​ပါမြို့နယ်​စုံရှိ လုံးချင်း/​မြေကွက်​များအား ဝယ်​ယူလို​သော ဧည့်​သည်​များရှိပါသဖြင့်​ ပိုင်​ရှင်​လူကြီးမင်းများကိုယ်​တိုင်​ ယုံကြည်​စိတ်​ချစွာ အပ်​နှံ​ပေးပါရန်​ ​လေးစားစွာ ဖိတ်​​ခေါ်အပ်​ပါသည်​။ (1) ဗဟန်းမြို့နယ်​အတွင်းရှိ _______________________ > ဆရာစံလမ်း၊ တက္ကသိုလ်​ရိပ်​သာလမ်း၊ က​မ္ဘောဇလမ်း၊ ​ရွှေ​တောင်​ကြားလမ်း > နတ်​​မောက်​လမ်း၊ ဖိုးစိန်​လမ်း၊ ​စောမဟာလမ်း၊ နတ်​​မောက်​ရိပ်​သာလမ်း > ငါးထပ်​ကြီးဘုရားလမ်း၊ မဟာစည်​သာသနာ့ရိပ်​သာလမ်း၊ သာယာဝတီလမ်း (2) ရန်​ကင်းမြို့နယ်​အတွင်းရှိ ________________________ > မိုး​ကောင်းလမ်းမကြီးနှင့်​ အတွင်းလမ်းသွယ်​များ > ​အောင်​​ဇေယျလမ်းမကြီးနှင့်​ အတွင်းလမ်းသွယ်​များ > ​ကျောက်​ကုန်းလမ်းမကြီးနှင့်​ အတွင်းလမ်းသွယ်​များ > ပါရမီလမ်းမကြီးနှင့်​ အတွင်းလမ်းသွယ်​များ > သုခဝတီအတွင်းရှိ လုံးချင်း​မြေကွက်​များ (3) ...
🤗🤗** ယခုတင်ထားသော Post မှ နံပါတ်(2)ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ ကန်ဘဲ့လမ်း Mini Condo အခန်းလေးအရောင်းထွက်သွားပါပြီ။ ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းရောင်းချပေးပါသော အိမ်ရှင်နှင့်ရွှေဥဒေါင်းမင်းအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်အား ယုံကြည်စွာဝယ်ယူ အားပေးသော Customer လူကြီးမင်းများအားလုံးကိုကျေးဇူး အထူးပင်တင်ရှိ ပါသည်။ **🤗🤗
🤗🤗** ယခုတင်ထားသော Post မှ နံပါတ်(2)ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ ကန်ဘဲ့လမ်း Mini Condo အခန်းလေးအရောင်းထွက်သွားပါပြီ။ ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းရောင်းချပေးပါသော အိမ်ရှင်နှင့်ရွှေဥဒေါင်းမင်းအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်အား ယုံကြည်စွာဝယ်ယူ အားပေးသော Customer လူကြီးမင်းများအားလုံးကိုကျေးဇူး အထူးပင်တင်ရှိ ပါသည်။ **🤗🤗 ...
🎉🎉** စမ်းချောင်းမြို့နယ်တွင် ဈေးနှုန်းသင့်တော်သော အလွှာနိမ့်တိုက်ခန်းအရောင်းစာရင်းများ..**🎉🎉
🎉🎉** စမ်းချောင်းမြို့နယ်တွင် ဈေးနှုန်းသင့်တော်သော အလွှာနိမ့်တိုက်ခန်းအရောင်းစာရင်းများ..**🎉🎉 1. သီရိလမ်း 🌿 ပေ(12.5×50) Normal bedrooms 2, လျှာထိုးခင်း, ပြင်ဆင်ပြီး 1F သိန်း 500(ညှိနှိုင်း) ( AS-049162) 2. ဝါးခယ်မလမ်း 🌿 ပေ(15×50) Hall, RC ခင်း(ဘယ်ညာနှစ်ခန်း) 1F(တိုက်သစ်) သိန်း 600(ညှိနှိုင်း) ( AS-049150) 3. မကြီးကြီးလမ်း 🌿 ပေ(13.5×60) Normal bedroom 1, Air-con 1, လျှာထိုးခင်း 2F သိန်း 650(ညှိနှိုင်း) ( AS-049153) 4. မြေနီကုန်းဈေးလမ်း 🌿 ပေ(15×60) Normal bedrooms 2, RC ခင်း, ကြွေကပ် 1F သိန်း 700(ညှိနှိုင်း) ( AS-049157) ************************************************************ 👇👇 အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ်လေးနှိပ်ပြီး ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ 👇 ☎️☎️☎️Tel : 09- 5148486/09-785148486/01-9317833 📞📞 24 Hour Hot Line : 09- 450058012 🌐🌐 Website : www.goldenpeacockmm.com ◾️◾️ #GoldenPeacockRealEstate ## ...
GEMS condo with pool view for rent at Hlaing Township. Location - GEMS condo, Hlaing Township.(12 minutes driving distance to Gamone Pwint Shopping mall, Hledan center, Market Place, Lotte Hotel, Lotte residence and Inya lake) Living area - 905sqft One Master bedroom, one single bedroom and store room Swimming pool and gym 24hrs security, lift , car parking and backup generator Furniture list:Three air conditioners, TV,TV stand , water heater, bed and mattress, sofa settee, curtains on all windows, kitchen with kitchen cupboard, burner, wardrobe, dressing table, washing machine, fridge and dining table with chairs etc... Rental price - USD1,200 per month (Negotiable) Contact: 09420708439(whatsapp) ,+959962215551(viber) Email : sale@myanmarmegaproperty.com sanaung@myanmarmegaproperty.com #GEMS_condo #condo #residence #hlaing #swimming_pool #gym #service_apartment ...
- Shared by Myanmar Mega Property Read More
** ဝယ်​ယူလိုသည်​ **
** ဝယ်​ယူလိုသည်​ ** __________________ ကျွန်​​တော်​များကုမ္ပဏီတွင် 1. Time City 2. Hill Top Vista 3. Space Yakin 4. တ/ဥ (ရတနာအိမ်​ရာ) 5. Crystal Tower 6. တ/ဥ၊ ဟံသာဝတီအိမ်​ရာ 7. Time မင်းရဲ​ကျော်​စွာ 8. ​ရွှေအုန်းပင်အိမ်​ယာ 9. The Gems 10. မလိခ Condo 11. မြတ်​မင်္ဂလာ Tower 12. Time Link 13. ပညာဝတီ Condo 14. ​ရွှေဇမ္ဗူဒိတ်​ Condo 15. Twin Centro 16. Hill Top 17. Sky Sutes Condoများအား ဝယ်​ယူ လို​သော(Customer)ဧည့်​သည်​များရှိပါသဖြင့်​ ပိုင်​ရှင်​လူကြီးမင်းများကိုယ်​တိုင် ယုံကြည်​စိတ်​ချစွာ အပ်​နှံ​ပေးပါရန်​ ​လေးစားစွာ ဖိ်​တ်​​ခေါ်အပ်​ပါသည်​။ Mobile - 09799991090, 09799991092, 09799991095 Viber - 09253251133 Gmail - rabbitfamilyrealestate@gmail.com Website - rabbitfamily.com # Real Estate # # Property # # Land & house # ...
🎉🎉** လှိုင်မြို့နယ်၊ ဘူတာရုံလမ်း YN Condo တွင် အခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။ **🎉🎉
🎉🎉** လှိုင်မြို့နယ်၊ ဘူတာရုံလမ်း YN Condo တွင် အခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။ **🎉🎉 ☑️ အကျယ်အဝန်း - ပေ(25×75) ☑️သိန်း 2000(ညှိနှိုင်း) 💰💰 ☑️ ဝရံတာ - (၃)ခုပါ ☑️ အိပ်ခန်း - Master bedroom 1, Normal bedrooms 2, ကျွန်းပါကေး ☑️ Air-Cons (4)လုံး ☑️ ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာ -(၃)စုံ ☑️ Lift, Security, Car Parking ☑️ တိုက်သက်တမ်း -(၃)နှစ်ဝန်းကျင် (BCC ကျပြီး) ☑️ တိတ်ဆိတ်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်တည်ရှိပါသည်။🤗🤗 (CS-048102) *********************************************** 👇👇 အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ်လေးနှိပ်ပြီး ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ 👇👇 ☎️☎️☎️Tel : 09- 5148486/09-785148486/01-9317833 📞📞 24 Hour Hot Line : 09- 450058012 🌐🌐 Website : www.goldenpeacockmm.com ◾️◾️ #GoldenPeacockRealEstate ## ...
* မိသားစု​နေထိုင်​ရန်​နှင့်​ လုပ်​ငန်းလုပ်​ရန်​သင့်​​လျော်​​သော​နေရာမှ လုံးချင်း/​မြေ အ​ရောင်း/အဌားများ *
* မိသားစု​နေထိုင်​ရန်​နှင့်​ လုပ်​ငန်းလုပ်​ရန်​သင့်​​လျော်​​သော​နေရာမှ လုံးချင်း/​မြေ အ​ရောင်း/အဌားများ * __________________________________________________________________________________ အ​ရောင်း _______ 1. ရက၊ ပါရမီရိပ်​သာ (4500Sqft) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​မြေ (4500သိန်း) ​​​​​​​​​​ 2. တ/ဥ၊ သံသုမာလမ်းမအနီး (60x60) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​မြေ (4000သိန်း) 3. မရက၊​ရွှေနှင်းဆီ (30x56) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​RC2,M3 (3300သိန်း) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 4. သဃက၊ မြယမုံကမ်းသာယာအိမ်​ယာ (40x60) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​RC2,M2,S2 (2500သိန်း) 5. မ/ဒဂုံ၊ ဦးဝိစာရဂုတ်​ (34W) (40x60) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​RC2 (2000သိန်း) 6. မ/ဒဂုံ၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း​ကျောကပ်​(29W) (40x60) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​မြေ (1000သိန်း) အဌား _____ ​​​​​​​​​​​​​​​​ 1. ဗဟန်း၊ ဗညားဒလလမ်းမဂုတ်​ ...
🙏ဆူးလေးဘုရားသွားမလား ? 🌲ဗန္ဓုလ ပန်းခြံသွားမလား ? Shopping Center လား ? 🛒🛍
🙏ဆူးလေးဘုရားသွားမလား ? 🌲ဗန္ဓုလ ပန်းခြံသွားမလား ? Shopping Center လား ? 🛒🛍 ကားမှတ်တိုင်ကလဲ နီး ဈေးနုန်းလဲ သင့်တဲ့ ကွန်ဒိုအခန်းလေးငှါးရန် ရှိပါတယ်နော်...🍀🥰 💥 တည်နေရာ - ကျောက်တံတားမြို့နယ် 🏠ကွန်ဒိုတွင်ပါဝင်မှုများ🏠 ------------------------------ 👉 မာစတာအိပ်ခန်း (၁) ခန်း 👉 ရိုးရိုးအိပ်ခန်း (၂) ခန်း 👉 အဲကွန်း (၄) လုံး 👉 ပရိဘောဂပြည့်စုံ 👉 အကျယ် (1250) စတုရန်းပေ 💰💰တလငှါးရမ်းခ => (800) U$💰💰 --------------------------------------------------------------------------- 🎉👉 အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိလိုပါက အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များကိုဆက်သွယ်စုံးစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင့်... 👇👇👇 📞 09 797 990 880 📞 09 440 9988 40 📞 09 440 9988 50 📣 ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ - အမှတ် (၈၁၉)၊ ဒုတိယထပ်၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် လှည်းတန်းလမ်း ထောင့်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။ 📧 admin@perfectworldmm.com 📧 info@propertygreat.com 📧 perfectworldoffice@gmail.com ...
- Shared by Perfect World Property အိမ် ခြံ မြေ ဝန်ဆောင်မှု Read More
🎉🎉** မြို့နယ်စုံတွင်ရောင်းရန်ရှိသော လုံးချင်း/မြေကွက်အရောင်း စာရင်းများ..**🎉🎉
🎉🎉** မြို့နယ်စုံတွင်ရောင်းရန်ရှိသော လုံးချင်း/မြေကွက်အရောင်း စာရင်းများ..**🎉🎉 1. သာကေတ၊ မာန်ပြေလမ်းသွယ် ◾️ ပေ(40×60) ◾️ဂရန် အမည်ပေါက်( BN-1) ◾️** ဈေးနှုန်း - သိန်း 1500(ညှိနှိုင်း) **💰💰 ( HS-044390) .......................................... 2. သာကေတ၊ မြခွာညိုအိမ်ရာ ◾️ ပေ(60×80) ◾️ဂရန် အမည်ပေါက်( RC1 1/2) ◾️** ဈေးနှုန်း - သိန်း 5500(ညှိနှိုင်း) **💰💰 ( HS-046388) ........................................ 3. မရမ်းကုန်း၊ (၈)မိုင် Junction-8 အနီး ◾️ ပေ(35×90) ◾️ဂရန် အမည်ပေါက်( RC1 1/2) ◾️** ဈေးနှုန်း - သိန်း 7000(ညှိနှိုင်း) **💰💰 ( HS-046891) ........................................... 4. သာကေတ၊(7)မိုင် Marcedez Showroom အနီး ◾️ ပေ(45×60) ◾️ဘိုးဘွားပိုင်(RC-1) ◾️** ဈေးနှုန်း - သိန်း 7000(ညှိနှိုင်း) **💰💰 ( HS-044991) ........................................ 5. သာကေတ၊ ရတနာလမ်းမ ◾️ ပေ(60×80) ◾️ဂရန် အမည်ပေါက်(မြေကွက်) ◾️** ဈေးနှုန်း - သိန်း 7000(ညှိနှိုင်း) **💰💰 ( ...
Code/119-4919 Brand New House for Rent in Dagon Tsp Location : Taw Win Street, Dagon Township. • Building : 4.5RC(10000Sqft) • Land Size : (45' × 100') •6master bedroom,2single bedroom • 17Aircons,3loving room • basement hall type • Maid room • Power Rental Fees_ 13500 USD(nego) #Available for NGO, Foreigner Office, Local Office, Embassy, Stay. Pls let us know about this ad code. Shwe Myanmar Property real estate ☎09 5036616(Viber,WhatsApp,LINE) 0995 5036616(Viber,WhatsApp,LINE) ...
🎉🎉** မရမ်းကုန်း၊ (၇)မိုင်ဦးအောင်ကျော်လှလမ်းသွယ်တွင် မြေကွက်ရောင်းရန်ရှိပါသည်။** 🎉🎉
🎉🎉** မရမ်းကုန်း၊ (၇)မိုင်ဦးအောင်ကျော်လှလမ်းသွယ်တွင် မြေကွက်ရောင်းရန်ရှိပါသည်။** 🎉🎉 ☑️ ဈေးနှုန်း - သိန်း 12000(ညှိနှိုင်း) ☑️ ပေ(50×130) ☑️ ဘိုးဘွားပိုင် ☑️ မြေသီးသန့်(ခြံခတ်ပြီး) ☑️ ပြည်လမ်းမနှင့်(၂)မိနှစ်လမ်းလျှောက်အကွာအဝေး။ (HS-049561) ☝️☝️အထက်ပါစာရင်းများအပြင် အခြားမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ်အရောင်းစာရင်းများအားသိရှိလိုပါက ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ☎️☎️☎️Tel : 09- 5148486/09-785148486/01-9317833 📞📞 24 Hour Hot Line : 09- 450058012 🌐🌐 Web site: www.goldenpeacockmm.com ...
* ကွန်​ဒို/တိုက်​ခန်း အ​ရောင်းသီးသန့်​ *
* ကွန်​ဒို/တိုက်​ခန်း အ​ရောင်းသီးသန့်​ * _______________________________ 1. ​​Golden Rose Condo၊ အလုံ (2100Sqft) M2,S2,AC6,​ရွှေတိဂုံဗျူး (​4000သိန်း) 2. ​Royal ဆင်​မင်းကွန်​ဒို၊ အလုံ (1900Sqft) M2,S1,F.F (3800သိန်း) 3.​ ​​The Gems Condo၊ လှိုင်​ (1505Sqft) M2,S1,F.F (3150သိန်း) 4.​ ​​​​​​​​ငပလီ Condo၊ ဒဂုံ (2050Sqft) အကြမ်းထည်​ (2700သိန်း) 5. ​​ဇဝန Condo၊ သဃက (1650Sqft) M1,S2,AC4 (1600သိန်း) 6.​ ​​​​ရွှေအင်​ကြင်းရိပ်​မွန်​၊ သဃက (2400Sqft) M2,S1,AC3,ပြင်​ပြီး (1600သိန်း) 7.​ ​​​​​​​​​​​ဘုရင့်​​နောင်​ Tower၊ ကမရ (1350Sqft) M1,S2,ပြင်​ပြီး (​1550သိန်း) 8. ​ရွှေထန်းပင်​ကွန်​ဒို၊ ကမရ (1325Sqft) M1,S1,ပြင်​ပြီး (​1500သိန်း) 9. ​လှိုင်​ Mini Condo သစ်​၊ လှိုင်​ (1650Sqft) M1,Lift,Ph (1200သိန်း) Mobile - 09799991090, 09799991092, 09799991095 Viber - 09253251133 Gmail - rabbitfamilyrealestate@gmail.com Website - rabbitfamily.com # Real Estate # # Property # # Land & house ...
ဒဂုံ မြို့နယ်​ ​တော်​ဝင်​လမ်း လုံးချင်း ငှါးမည်​
ဒဂုံ မြို့နယ်​ ​တော်​ဝင်​လမ်း လုံးချင်း ငှါးမည်​ Land and House For Rent House ( 4RC ½) Brand New House ( Yaw Min Gyi Area ) 🏦 Dagon Township , Taw Win Street - Land 45×100 - 4.5RC -6Master BedroomS -2Single Bedroom - 3Living RoomS - 17 AirCon - Basement Hall type - Power Meter and Lighting Meter - Carparking ( Suitable for Head Office, NGO office, Embassy , Pravite School and etc.. ) Rental Price. 13500 USD 🏦 ဒဂုံမြို့နယ်​ ​တော်​ဝင်​လမ်း , အိမ်​အသစ်​ - ​မြေအကျယ်​ 45' ×100' - ၄ ထပ်​ခွဲ - မာစတာ ၆ ခန်း - ရိုးရိုး ၂ ခန်း - အဲကွန်း ၁၇ လုံး - ပါဝါမီတာ နဲ့ lighting power ပါ 🚩 နိုင်​ငံခြားသားများ ​နေထိုင်​ရန်​ / NGO ရုံးခန်းများ / သံရုံး / Local ရုံးခန်းများ လက်​ခံသည်​။ Ph - 09779771193 Ph - 0943077610 ( viber and whatsapp ok) Ph - 09420718183 Ph - 09697999979 I have many apartments, condo, land and house, warehouse, land only ...
စမ်းချောင်းမြို့နယ် ဗဟိုလမ်းမပေါ်ရှိ သဇင်အိမ်ယာ ပြင်ဆင်ပြီးအခန်းငှားမည်။
စမ်းချောင်းမြို့နယ် ဗဟိုလမ်းမပေါ်ရှိ သဇင်အိမ်ယာ ပြင်ဆင်ပြီးအခန်းငှားမည်။ အကျယ် - 1800 Sqft အလွှာ - တတိယထပ် ( no lift ) အခန်းပါဝင်မှု - 1 Master Bedroom( ရေချိုးခန်းအိမ်သာတွဲလျှက်) -2Single Bedrooms ပါဝင်ပစ္စည်း - ပုံပါအတိုင်း အကုန်ပါသည် ( လိုအပ်ပါက ဆိုဖာတစ်စုံထည့်ပေးမည် ) Housing Facilities - Carparking ပါသည် ( ရုံးခန်း သို့ လူနေ အထူးသင့်တော်သည် ) အငှားဈေးနှုန်း - 700,000 MMK Ph - 09779771193 Ph - 0943077610 ( viber and whatsapp ok) Ph - 09420718183 Ph - 09697999979 I have many apartments, condo, land and house, warehouse, land only , office ,ground floor for your business and etc..... So, please contact me if you need anything. #I-will-take-agent fee.😊😊 https://www.facebook.com/myatsupan.realestate/ ...
>>> ဌားမည် <<< Code No. ( S - 406 ) အဌားဈေးနှုန်း = ၁၅ သိန်း (ညှိနိူင်း) မန္တလေးမြို့ ။ ချမ်းအေးသာဇံမြို့ နယ်။ ၇၄ လမ်း နှင့် ၃၃ လမ်းအနီးရှိ RC -2ထပ် ပေ ( 30 * 45 ) လူနေ / ရုံးခန်း / သင်တန်း ပြုလုပ်လို့ ရသော ရေမီးစုံ အသင့်နေရာကောင်း ဌားမည်။ ဆက်သွယ်ရန် =၀၉ ၉၇၇၆၁၁၃၄၁ ၀၉ ၄၀၂၇၈၄၉၉၁ Viber Pho = +959402784991 ...
- Shared by ရွှေနန်းတော်ဝင် အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း Read More
☘️"Forest City" the paradise island between Malaysia and Singapore with latest Land Reclamation Technology.☘️
☘️"Forest City" the paradise island between Malaysia and Singapore with latest Land Reclamation Technology.☘️ ✅ စင်္ကာပူ၊ ဟောင်ကောင်နိုင်ငံများကဲ့သို့ ဖြစ်လာမည့် အကြီးဆုံး ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းကြီးဖြစ်သည့် Man-made Island 🌴 " Forest City " စီမံကိန်းကြီးရှိ Property များအား YPF agency မှတဆင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားနိုင်ပြီ။ 🌴 🌴 Forest City စီမံကိန်းကြီးသည် စင်္ကာပူအစိုးရနှင့် မလေးရှားအစိုးရတို့ ပူးပေါင်းအကောင်ထည်ဖော်နေသော Man-made Island ကြီးဖြစ်ပြီး အကြီးဆုံးဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ♦️ Forest City တွင် နေထိုင်ခြင်း ဖြင့် စင်ကာပူ-မလေးရှား မြို့နှစ်မြို့တွင် နေထိုင်ခြင်း - စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ အဆင့်မြင့်လူနေမှုပုံစံနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံ ရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှုတို့ ကို တပြိုင်တည်းရရှိခံစားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ♦️ မလေးရှားလူမျိုးတို့၏ အထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် တည်ရှိပြီး အာရှရှိ အကောင်းဆုံး ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု နေရာများကို နှစ်သက်စွာ ခံစား အသုံး ပြုနိုင် မည် ...
မင်္ဂလာပါ 👏👏👏 လူကြီးမင်းတို့ လိုအပ်သော 🏘 အိမ်ခြံမြေ 🏘 များကို ⭐ ရောင်းချင်သလား ❓❓❓ ⭐ ဝယ်လိုသလား ❓❓❓ ⭐ ငှားရမ်းချင်းသလား ❓❓❓ ရွိုင်ရယ်ထွန်းသစ္စာ အိမ်ခြံမြေ ကို ဆက်သွယ်ထား 👍 💯တိကျ ✔မှန်ကန်🚀 မြန်ဆန်တာ ရွိုင်ရယ်ထွန်းသစ္စာ 💖 ရွိုင်ရယ်ထွန်းသစ္စာ အိမ်ခြံမြေ ကုမ္ပဏီ တိုက်ခန်းအမှတ်-ဘီ-၄၊ လမ်း(၃၀)၊ ၆၄x၆၅ လမ်းကြား၊ နန်းအိမ်သူတိုက်တန်း၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ 09-96 20 60 465, 09- 20 60 465 https://www.facebook.com/royal.tunthitsar.mandalay/ ...
🙋‍♂️🙋‍♀️ ကမ္ဘောဇဘဏ်အိမ်ရာချေးငွေဌာန၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုဖြင့် နာမည်ကြီးအိမ်ခြံမြေကုမ္ပဏီများစုပေါင်း၍ အိမ်ရာပေါင်းများစွာအားပြသမည့် အိမ်ခြံမြေပြပွဲအား 7-9-2019 (Saturday) နှင့် 8-9-2019 (Sunday)နေ့များတွင် မနက် (93း0) မှ ညနေ (7း00)နာရီ အထိ (၂)ရက်တိုင်တိုင် ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ကျွန်းတောလမ်းမ၊ Unit (1)၊ Junction Square Compound ၊ KBZ Bank (ကျွန်းတောလမ်း ဘဏ်ခွဲ) တွင် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ 🙋‍♂️🙋‍♀️
🙋‍♂️🙋‍♀️ ကမ္ဘောဇဘဏ်အိမ်ရာချေးငွေဌာန၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုဖြင့် နာမည်ကြီးအိမ်ခြံမြေကုမ္ပဏီများစုပေါင်း၍ အိမ်ရာပေါင်းများစွာအားပြသမည့် အိမ်ခြံမြေပြပွဲအား 7-9-2019 (Saturday) နှင့် 8-9-2019 (Sunday)နေ့များတွင် မနက် (93း0) မှ ညနေ (7း00)နာရီ အထိ (၂)ရက်တိုင်တိုင် ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ကျွန်းတောလမ်းမ၊ Unit (1)၊ Junction Square Compound ၊ KBZ Bank (ကျွန်းတောလမ်း ဘဏ်ခွဲ) တွင် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ 🙋‍♂️🙋‍♀️ 🏢🏢အဆိုပါပြပွဲတွင် တိုက်ခန်း၊ Mini Condo၊ Condo နှင့် လုံးချင်းများကို ဈေးကွက်ထဲတွင် အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်နေသော ဈေးနှုန်းများဖြင့် ပြသမည်ဖြစ်ပါသည်။ 🏢🏢 ပြပွဲအတွင်းအဆိုပါ အိမ်ရာများအား- 🤩🤩 💰(၁) ငွေသားဖြင့် ချက်ချင်းလက်ငင်းဝယ်ယူနိုင်သကဲ့သို့ 💰(၂) ကမ္ဘောဇဘဏ်အိမ်ရာချေးငွေရယူကာ ၀ယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 🤗🤗 ထို့အပြင် - ကမ္ဘောဇဘဏ်အိမ်ရာချေးငွေဌာန၏ အထူးအစီအစဉ်အဖြစ် 💥- ဝန်ဆောင်ခနှုန်းထား လျော့ချပေးမည့် အစီအစဉ်အသစ် 💥 - အတိုးနှုန်းသက်သာမည့် ...
လှိုင်မြို့နယ် ရွှေင်္ဟသာလမ်းအနီး ခြံ....60'x60' တစ်ထပ်တိုက် 1-master2-single,A/C ခြံအတွင်း ကား ၂စီးခန့်ရပ်နားနိုင် တစ်လ.....၁၅သိန်း ...
Aung Chan Thar Condo for rent and Sale #900USD Located in corner of Aung Zaya Road and Aung Chan Thar Street, near South Oakkala Industrial Zone, 10 mins drive to Myanmar Plaza, Yankin Township, Yangon. - 1100 Sqft - 5th Floor - 1 Master Bedroom - 1 Single Bedroom - Fully Furnished - Lift card system - 24hr Generator Backup for all - 24hr security - Gym - Carparking - Many restaurants in near Rental Price - 900 USD Sale Price - 1800 Lakh ...
~ Wide Land ~
~ Wide Land ~ 【Followed by English message】 ⏩ အိမ်ခြံမြေစာရင်းအမှတ် > ( RN - 12622 ) 🏘 ခြံကျယ်ကျယ် ဂိုဒေါင်ပါ ၂ထပ်တိုက်လုံးချင်း အငှား 🏘 နေရာ - မရမ်းကုန်း မြို့နယ် အဆောက်အဦးအမျိုးအစား - လုံးချင်း အလွှာ -2ထပ်တိုက် လုံးချင်း + ဂိုဒေါင် အခန်းအမျိုးအစား - Single Room ၂ ခန်း၊ Master Room ၂ ခန်း အကျယ်အ၀န်း - ၈၉၆၁ စတုရန်းပေ (မြေ) 💰 အငှား ဈေးနှုန်း - ၁၇ သိန်း (တစ်လ အငှား) ✅ ကားပါကင် ပါဝင်ပါသည်။ 🚘 ဘုရင့်နောင်တံတား နှင့်နီးပါသည်။ နေရာကောင်းတွင် တည်ရှိသောကြောင့် မိသားစုနေရန်သာမက ရုံးခန်းဖွင့်ရန်လည်း သင့်တော်ပါသည်။ ✆﻿ : ဆက်သွယ်ရန် - 📞 09 458285095 📞 09 458255805 (Viber) 📩 moom-estate@gzeal.co.jp 📩 http://www.moom-estate.com/mm/ ⏩ Property Number > ( RN - 12622 ) 🏘 Housing for Rent Type - Housing Place - Mayangone Township Floor -2RC Housing + Warehouse Room Type -2Single Room,2Master Room Area - 8961 Sqft (Land) 💰 Rent Price - 17 Lks (Rent per month) ✅ Facility : Car ...
- Shared by MOOM Real Estate - Yangon Myanmar Read More
~ Fair Price & Good Place ~
~ Fair Price & Good Place ~ 【Followed by English message】 ⏩ အိမ်ခြံမြေစာရင်းအမှတ် > ( RN - 12390 ) 🐓🐓 လူစည်ကားတဲ့နေရာ၊ သွားလာရလွယ်ကူတဲ့နေရာကို ရှာနေသူတို့အတွက်တင်ပေးပြန်ပါပြီနော်...... နေရာ - တာမွေ မြို့နယ် အဆောက်အဦးအမျိုးအစား - တိုက်ခန်း အလွှာ - ဒုတိယထပ် အခန်းအမျိုးအစား - Single Room ၂ ခန်း အကျယ်အ၀န်း - ၉၆၀ စတုရန်းပေ 💰 အရောင်း ဈေးနှုန်း - သိန်း ၇၀၀ (အရောင်း) ✅ ပါဝင်သောဝန်ဆောင်မှုများ - 🐓 လေအေးပေးစက် ၂လုံး 🚘 City Express၊ Food Box ထိုင်းစားသောက်ဆိုင်၊ ကားမှတ်တိုင် တို့နှင့်နီးပါသည်။ နေရာကောင်းတွင်တည်ရှိသောကြောင့် မိသားစုနေထိုင်ရန် သာမကရုံးခန်းဖွင့်ရန်ပါသင့်တော်ပါသည်။ ✆﻿ : ဆက်သွယ်ရန် - 📞 09 458285095 📞 09 458255805 (Viber) 📩 moom-estate@gzeal.co.jp 📩 http://www.moom-estate.com/mm/ ⏩ Property Number > ( RN - 12390 ) 🏣 Apartment for Sale Type - Apartment Place - Tamwe Township Floor - 2nd Floor Room Type -2Single Room Area - 960 Sqft 💰 Sale Price - 700 Lks (Sale) ✅ ...
( စားသောက်ဆိုင် ရုံးခန်း Showroom အကုန်လက်ခံ )
( စားသောက်ဆိုင် ရုံးခန်း Showroom အကုန်လက်ခံ ) ပန်းပဲတန်းမြို့နယ် ၂၈ လမ်းရှိ ပေကျယ် မြေညီအခန်း ငှားမည်။ - 20 ' X 50 ' - မြေညီ - လုပ်ငန်းစုံလက်ခံ - ဟော Rental Price - 15 Lakh အကျိုးဆောင်ခ တစ်လစာယူပါသည်။ အိမ်ရှင်များလဲ မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်သည့် တိုက်ခန်း ကွန်ဒို လုံးချင်း စက်မှုဇုန် ဂိုထောင်များကို ရောင်း ငှားလိုပါက အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်အပ်နှံနိုင်ပါသည်။ PH - 0943077610 ( Viber and WhatsApp ok ) , 09779771193 ...
Land and House for rent in Yamonnar Housing #1700USD Located in Yamonnar Housing, Mahar Bandula Road, near Yamonnar Road, 5mins drive to Downtown area, Dawpon Township, Yangon. - 50' x 75' -2RC -3Master Bedrooms with bathroom attached - 1 Single Bedroom - Furniture - Owner accept office and residencial - Teak Floor - Line Phone - Aircon4#Owner will take 1 month deposit for any damage and electricity charges. Rental Price - 1700 USD ( 25 Lakh ) ...
လှိုင်မြို့နယ် အေးရိပ်မွန်အိမ်ယာဝန်းအတွင်းရှိ ပြင်ဆင်ပြီး Condo Facilities အပြည့်ပါသော ကွန်ဒို Penthouse အခန်းအား ညှိနှိုင်းဈေးဖြင့် ရောင်းမည် သို့ ငှားမည်။
လှိုင်မြို့နယ် အေးရိပ်မွန်အိမ်ယာဝန်းအတွင်းရှိ ပြင်ဆင်ပြီး Condo Facilities အပြည့်ပါသော ကွန်ဒို Penthouse အခန်းအား ညှိနှိုင်းဈေးဖြင့် ရောင်းမည် သို့ ငှားမည်။ Condo Penthouse room for rent and Sale #1300USD Located in Aye Yeik Mon Housing Compound, near ISM International School, between Bayint Naung Road and Baho Road, Hlaing Township, Yangon. - 2500 Sqft -2Master Bedrooms - 1 Room included bathtub - 1 Maid Room - Lift - Aircon5- Water Heater - Generator Backup - Lift2- Carparkimg - Teak Floor - Security Rental Price - 1300 USD Sale Price - 2600 Lakh Ph - 09779771193 Ph - 0943077610 ( viber and whatsapp ok) Ph - 09420718183 Ph - 09697999979 I have many apartments, condo, land and house, warehouse, land only , office ,ground floor for your business and etc..... So, please contact me if you need anything. #I-will-take-agent ...
🇲🇲🇲🇲အောက်တွင်မြန်မာဘာသာဖြင့်ဖော်ပြထားပါသည်။.လုံးချင်းအငှား⤵️⤵️ 🎉🎉** House For Rent in Kyeemyindaing Township, which are suitable for Living and Office.,** 🎉🎉 1.Kyeemyindaing Street (25×35) Normal bedrooms 5, RC RC-1 10 Lakhs(nego) ( HR-047980) 2. Kyeemyindaing Street (25×55) Normal bedrooms 5, RC RC-1 10 Lakhs(nego) ( HR-045949) 3. Kyeemyindaing, Bagayar Road (30×50) Hall BN-1 10 Lakhs(nego) ( HR- 043549) 👩 👱‍♂️ Please contact us for more details or more data listings.👩 👱‍♂️ ☎️ ☎️ Contact us : 09- 5148486/09-785148486/01-9317833 📞📞 24 Hour Hot Line : 09- 450058012 🌐🌐 Web site: www.goldenpeacockmm.com 🎎 🎎 Thanks & Haveagreat day !!!! 🎎 🎎 ---------------------------------------------------------------------------------- 🎉🎉** ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ ရုံးခန်း/ လူနေထိုင်ရန်သင့်သော လုံးချင်းအိမ်အငှားစာရင်းများ.. ** 🎉🎉 1. ကြည့်မြင်တိုင် လမ်းကျယ် ...
Code/117-3919 တောင်ဥက္ကလာ ၉ ရပ်ကွက် ဝေဇန္တာလမ်းမအနီး လုံးချင်းအိမ်အငှါး မြေ (40×60)3RC တိုက်သစ် 6Master,8AC လူနေရုံးခန်းအတွက်အရမ်းကောင်းပါတယ် ကားပါကင်လဲရတယ် အငှါးတစ်လ- 35 သိန်း(ညှိနှိုင်း) Pls let us know about this ad code. Shwe Myanmar Property real estate ☎09 5036616(Viber,WhatsApp,LINE) 0995 5036616(Viber,WhatsApp,LINE) ...
🎉🎉** စမ်းချောင်းမြို့နယ် City Martအနီးတွင် ရွှေတိဂုံဘုရားView လိုချင်သော Customerများအတွက် အခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။ ** 🎉🎉
🎉🎉** စမ်းချောင်းမြို့နယ် City Martအနီးတွင် ရွှေတိဂုံဘုရားView လိုချင်သော Customerများအတွက် အခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။ ** 🎉🎉 🌿လမ်း - ရှင်စောပုဘုရားလမ်း 🌿အကျယ်အဝန်း - 1100 sqft 🌿အိပ်ခန်း - Normal bedrooms 3, ပါကေးခင်း၊ နံရံကြွေအပြည့်ကပ် (အသင့်နေနိုင်) 🌿Air-con4လုံး 🌿ပါဝင်သော Facilities - Lift 🌿View - Shwedagon Pagoda View 🌿ဈေးနှုန်း - သိန်း 1450 (ညှိနှိုင်း) 🌿(CS-046063) 👇👇 အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ်လေးနှိပ်ပြီး ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ 👇👇 ☎️☎️☎️Tel : 09- 5148486/09-785148486/01-9317833 📞📞 24 Hour Hot Line : 09- 450058012 🌐🌐 Website : www.goldenpeacockmm.com ◾️◾️ #GoldenPeacockRealEstate ## ...
🇲🇲🇲🇲အောက်တွင်မြန်မာဘာသာဖြင့်ဖော်ပြထားပါသည်။.လုံးချင်းအငှား⤵️⤵️ 🎉🎉** House For Rent in good place of Yangon, which are suitable for Living and Office.,**🎉🎉 1. Bahan, U Chit Maung Lane (30×70) Normal bedrooms 4, Air-cons 4, Tile Floor RC-2 12 Lakhs(nego) ( HR-048532) 2. Sanchaung, Pan Hlaing Housing (30×60) Master bedroom 1, Normal bedroom 1, Parquet RC-2 17 Lakhs(nego) ( HR-044301) 3. Yankin, near Yankin Center (20×40) Normal bedrooms 3, Air-cons 3, Parquet RC-3 US 1000(nego) ( HR-044184) 4. Kamaryut, Pyi Lane near Bus Stop (53×63) Master bedrooms 2, Normal bedrooms2BN-2 US 1500(nego) ( HR-043139) 👩 👱‍♂️ Please contact us for more details or more data listings.👩 👱‍♂️ ☎️ ☎️ Contact us : 09- 5148486/09-785148486/01-9317833 📞📞 24 Hour Hot Line : 09- 450058012 🌐🌐 Web site: www.goldenpeacockmm.com 🎎 🎎 Thanks & Haveagreat day !!!! 🎎 ...
🎉🎉** လှိုင်မြို့နယ်ရှိ ဈေးနှုန်းသင့်တော်သော တိုက်ခန်းအရောင်းစာရင်းများ ..**🎉🎉
🎉🎉** လှိုင်မြို့နယ်ရှိ ဈေးနှုန်းသင့်တော်သော တိုက်ခန်းအရောင်းစာရင်းများ ..**🎉🎉 1. လှိုင်၊ သီရိမြိုင်လမ်း 🔷 ပေ(12×50) Hall, လျှာထိုးခင်း 2F 🔹သိန်း 360(ညှိနှိုင်း) ( AS-045592) 2.လှိုင်၊ ဘူတာရုံလမ်း 🔹 ပေ(12.5×50) Normal bedrooms 2, Air-cons 2, 🔹ပါကေး 2F 365 သိန်း(ညှိနှိုင်း) ( AS-045589) 3. လှိုင်၊ ဗဟိုလမ်း 🔹 ပေ(13×50) Hall, ပါကေး 2F 🔹375 သိန်း(ညှိနှိုင်း) (AS-045600) 4. လှိုင်၊ မဟာဆွေလမ်း×(၁)လမ်းထောင့် 🔹 ပေ(12.5×50) Hall, လျှာထိုးခင်း 1F 🔹သိန်း 400(ညှိနှိုင်း) (AS-045599) 5. လှိုင်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာရုံလမ်း 🔹 ပေ(14×55) Normal bedroom 1, Air-con 1, လျှာထိုးခင်း 🔹4F သိန်း 450(ညှိနှိုင်း) ( AS-045576) 6. လှိုင်၊ ပါရမီလမ်းမ 🔹 ပေ(13.5×60)Normal bedrooms 2, Air-con 1, လျှာထိုးခင်း 🔹3F သိန်း 450(ညှိနှိုင်း) ( AS-045626) 7. လှိုင်၊ ပါရမီလမ်းမ 🔹 ပေ(14×55) Normal bedroom 1, Air-con 1, ပါကေး 🔹2F ...
🎉🎉** မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ (၇)မိုင် ဦးလွန်းမောင်လမ်းသွယ်တွင် ဈေးနှုန်းသင့်တော်သော လုံးချင်းအိမ်ရောင်းမည်။ **🎉🎉
🎉🎉** မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ (၇)မိုင် ဦးလွန်းမောင်လမ်းသွယ်တွင် ဈေးနှုန်းသင့်တော်သော လုံးချင်းအိမ်ရောင်းမည်။ **🎉🎉 _ 4090 Sqft _ ဘိုးဘွား _ RC-2 အဆောက်အဦး ** ဈေးနှုန်း - သိန်း 4500(ညှိနှိုင်း) ** ( HS - 048721) 🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿 👇 အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ်လေးနှိပ်ပြီး ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ 👇 ☎️☎️☎️Tel : 09- 5148486/09-785148486/01-9317833 📞📞 24 Hour Hot Line : 09- 450058012 🌐🌐 Website : www.goldenpeacockmm.com ◾️◾️ #GoldenPeacockRealEstate ## ...
~ Office Tower Whole Building Rent ~ 【Followed by English message】 ⏩ အိမ်ခြံမြေစာရင်းအမှတ် > ( RN - 12601 ) 🏣🏣 စီးပွားရေးသမားများအတွက် Office Tower တစ်တိုက်လုံးအငှား MOOM မှာ ရှိပါတယ်ရှင် 🏣🏣 📞 ဟယ်လိုသာလုပ်လိုက်ပါနော် 📞 နေရာ - ပုဇွန်တောင် မြို့နယ် အဆောက်အဦးအမျိုးအစား - Office Tower အလွှာ - ၁၀ ထပ် အခန်းအမျိုးအစား - Hall ၁၀ ခန်း အကျယ်အ၀န်း - ၁၂၁၉၇ စတုရန်းပေ (မြေ) / ၃၃၀၀၀ စတုရန်းပေ (Office Tower တစ်တိုက်လုံး) 💰 တစ်တိုက်လုံး အငှားဈေးနှုန်း - သိန်း ၅၅၀ (တစ်လအငှား) ✔ ပါဝင်သောဝန်ဆောင်မှုများ - (၁) ၂၄ နာရီ မီးစက် (၂) ဓါတ်လှေကား (၃) လုံခြုံရေး (၄) Fire System (၅) ကားပါကင် (အစီး၄၀ ရပ်ရန်နေရာ) တို့ပါဝင်ပါသည်။ 🚘 ပုဇွန်တောင်River View ၊ ပုဇွန်တောင်ပန်းခြံ တို့နှင့်နီးပါသည်။ အချက်အချာကျသောနေရာတွင် တည်ရှိသောကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ရန်အတွက် အထူးသင့်တော်ပါသည်။ ✆﻿ : ဆက်သွယ်ရန် - 📞 09 458285095 📞 09 458255805 (Viber) 📩 moom-estate@gzeal.co.jp 📩 http://www.moom-estate.com/mm/ ⏩ ...
#Rent #တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် #သစ္စာလမ်းအပေါ် -40×60 -ထောင့်ကွက် -မြေပိုပါ -မြေပြင်တွင် 50-70 အကျယ်ရှိ -စားသောက်ဆိုင် /Showroom ရ ငှားရမ်းခ တလ ၃၀သိန်း ဆက်သွယ်ရန် #Myanmar Property Real Estate #Kohtetအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း 09 777969010 09 777969020 09 423675387 (Viber) သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် ...
အပတ်စဉ်အိမ်စာရင်းရယူနိုင်ရန် အောက်ပါလင့်တွင် မှတ်ပုံတင်ပါ။ (Register to receive weekly myanmar property update to your email.)
Relax in Luxury package လေးက စက်တင်ဘာလကုန်အထိပဲမလို့ အမြန်လာခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေ....
Relax in Luxury package လေးက စက်တင်ဘာလကုန်အထိပဲမလို့ အမြန်လာခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေ.... ၁ဦးကို ၅၅ ဒေါ်လာသာကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး swimming pool, spa, steam, sauna, Jacuzzi တို့ကို အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပြီး High tea ပါ ...
Meet the artists who have transformed Sydney Metro’s construction site at Marrickville 🎨. Over two weeks, these artists have createda125m mural that interprets what makes this part of Sydney unique. If you’re in the area, pop down to check it out. More here: https://www.sydneymetro.info/article/mural-makeover-marrickville
Meet the artists who have transformed Sydney Metro’s construction site at Marrickville 🎨. Over two weeks, these artists have createda125m mural that interprets what makes this part of Sydney unique. If you’re in the area, pop down to check it ...
Full Furnished & Full Service Apartment at Sanchange Area in Yangon
Full Furnished & Full Service Apartment at Sanchange Area in Yangon From, USD1200.00/Month , Monthly payment will be possible. Kindly be informed that we will have vacancy Room at 5th Floor on OCT .1 st. at our Myanmar Club Residence. If you are ...
Today we’re celebrating the Property Council's 50th birthday, and relishing that we’re part of Australia’s biggest industry with over 1.4 million jobs, shaping our cities and creating strong communities. Here’sasnapshot of whataday in the life of Frasers Property Australia looks like.
Today we’re celebrating the Property Council's 50th birthday, and relishing that we’re part of Australia’s biggest industry with over 1.4 million jobs, shaping our cities and creating strong communities. Here’sasnapshot of whataday in the life ...
Meet Jimmy Stringfellow, the operator of our huge 400 tonne crane high above Martin Place. He sits 60m above the city, lifting material and equipment into the central Sydney site. “Our main job is now getting all the rock out of there as they dig it out,” Jimmy told The Daily Telegraph’s Edward Boyd. Jimmy has watched the city change over the past 40 years, and has worked on projects like Centrepoint Tower over his career. Next time you’re near Martin Place, look up and 👋.
Meet Jimmy Stringfellow, the operator of our huge 400 tonne crane high above Martin Place. He sits 60m above the city, lifting material and equipment into the central Sydney site. “Our main job is now getting all the rock out of there as they dig it ...
Purple = pride! Today our favourite colour is purple, as we celebrate #wearitpurple day with Wear it Purple. Today, and every other day, we show acceptance for LGBTIQA+ people because we believe everyone has the right to be themselves, at work and in our communities. Frasers Property Australia formed our Gender Equity Council in 2015, and expanded its focus to broader areas of diversity and inclusion, including mental health, culture and ethnicity and LGBTIQA+, providing frank advice and good governance along our diversity and inclusion journey.
Purple = pride! Today our favourite colour is purple, as we celebrate #wearitpurple day with Wear it Purple. Today, and every other day, we show acceptance for LGBTIQA+ people because we believe everyone has the right to be themselves, at work and ...
မင်းသမီးချောလေး Naw Phaw Eh Htar က Pan Pacific Yangon ရဲ့ Infinity swimming pool နဲ့ spa ကို သဘောကျလို့ လာရောက်အသုံးပြုသွားပါသေးတယ်။
မင်းသမီးချောလေး Naw Phaw Eh Htar က Pan Pacific Yangon ရဲ့ Infinity swimming pool နဲ့ spa ကို သဘောကျလို့ လာရောက်အသုံးပြုသွားပါသေးတယ်။ Thank you very much Naw Phaw Eh Htar for choosing Pan Pacific Yangon. ...
Pan Pacific Yangon ဟိုတယ်နှင့် ၀န်ထမ်းများမှ စုပေါင်းပြီး မွန်ပြည်နယ် ရေဘေးသင့် ပြည်သူများအတွက် ဒေါ်ခင်ကြည် ဖောင်ဒေးရှင်း သို့ ၂၃.၈.၂၀၁၉ တွင် အလှူငွေများ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။
Pan Pacific Yangon ဟိုတယ်နှင့် ၀န်ထမ်းများမှ စုပေါင်းပြီး မွန်ပြည်နယ် ရေဘေးသင့် ပြည်သူများအတွက် ဒေါ်ခင်ကြည် ဖောင်ဒေးရှင်း သို့ ၂၃.၈.၂၀၁၉ တွင် အလှူငွေများ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ ...
It’s award season at Frasers Property Australia, and we’re thrilled to announce seven of our projects have been shortlisted in The Urban Developer Industry Excellence Awards 2019. We’re congratulating all our teams and partners who have worked hard to deliver an outstanding calibre of projects at the Central Park Sydney, Fairwater, DUO at Central Park, and River Homes at Hamilton Reach projects, who are shortlisted for the below awards:
It’s award season at Frasers Property Australia, and we’re thrilled to announce seven of our projects have been shortlisted in The Urban Developer Industry Excellence Awards 2019. We’re congratulating all our teams and partners who have worked hard ...
ZAN @ AYCT EC
ZAN @ AYCT EC "စားနိုင် သောက်နိုင်"တယ်ဆိုပြီးဂုဏ်ယူမနေပါနဲ့။ စားပြီးတဲ့အခါ မလိုအပ်တဲ့ calorie တွေဖယ်ရှားဖို့ နေ့စဉ် အားကစားလုပ်ဖို့လိုပါတယ်! ဒါကြောင့် Zan Recreation & Fitness club မှာဆုံကြပါစို့၊ နည်းစနစ်တကျ သင်ကြားပြသပေးမည့် Trainer ...
ညနေရူခင်းအလှ နှင့် “ဧရာချမ်းသာ"
ညနေရူခင်းအလှ နှင့် “ဧရာချမ်းသာ" ...
Relax time with “KALLOS “@ AYCT EC
Relax time with “KALLOS “@ AYCT EC တစ်နေ့တာရဲ့ပင်ပန်းမူတွေအတွက် “KALLOS” မှာအနားယူလိုက်ပါ။ (၇-၀၉-၂၀၁၉)နေ့တွင်ဖွင့်လှစ်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းပါးအပ်ပါသည်။ ...
LOTTE Hotel Yangon ရဲ့ ၂ နှစ်ပြည့်တဲ့ အထိမ်းအမှတ်အနေဖြင့် September အတွင်း Hotel ၏ Restaurant များတွင် လာရောက်သုံးဆောင်ကြသော ဧည့်သည်တော်များအတွက် ဗလာမပါတဲ့ “Scratch & Win” Lucky Draw အစီအစဉ် ၊ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် “Weekly Lucky Draw” အစီအစဉ် များ ကို ကျင်းပပြူလုပ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်းသတင်းကောင်းပေးအပ်လိုက်ရပါတယ်..
LOTTE Hotel Yangon ရဲ့ ၂ နှစ်ပြည့်တဲ့ အထိမ်းအမှတ်အနေဖြင့် September အတွင်း Hotel ၏ Restaurant များတွင် လာရောက်သုံးဆောင်ကြသော ဧည့်သည်တော်များအတွက် ဗလာမပါတဲ့ “Scratch & Win” Lucky Draw အစီအစဉ် ၊ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် “Weekly Lucky Draw” အစီအစဉ် များ ကို ...
𝐎𝐧 𝐎𝐮𝐫 𝐓𝐰𝐨-𝐘𝐞𝐚𝐫 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐫𝐲, 𝐚 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 “𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 𝐘𝐨𝐮” 𝐭𝐨 𝐎𝐮𝐫 𝐆𝐮𝐞𝐬𝐭𝐬 (𝐒𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟏𝟗)
𝐎𝐧 𝐎𝐮𝐫 𝐓𝐰𝐨-𝐘𝐞𝐚𝐫 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐫𝐲, 𝐚 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 “𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 𝐘𝐨𝐮” 𝐭𝐨 𝐎𝐮𝐫 𝐆𝐮𝐞𝐬𝐭𝐬 (𝐒𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟏𝟗) On this special occasion of our second anniversary, we at LOTTE Hotel Yangon, wish to offer our dearest ...
𝑯𝒂𝒑𝒑𝒚 𝑴𝒊𝒅-𝑨𝒖𝒕𝒖𝒎𝒏 𝑴𝒐𝒐𝒏𝒄𝒂𝒌𝒆 𝑭𝒆𝒔𝒕𝒊𝒗𝒂𝒍
𝑯𝒂𝒑𝒑𝒚 𝑴𝒊𝒅-𝑨𝒖𝒕𝒖𝒎𝒏 𝑴𝒐𝒐𝒏𝒄𝒂𝒌𝒆 𝑭𝒆𝒔𝒕𝒊𝒗𝒂𝒍 Indulge in your favorite moon cakes baked with deliciously Red Bean, Black Sesame, Lotus, Taro this Mid-Autumn Festival! Beautifully presented inasophisticated gift box perfect for ...
ချစ်မိတ်ဆွေတို့ ရဲ့ အိမ်ဂေဟာလေးကိုလှပစေဖို့ CTSM မှ တာဝန်ယူ ပြင်ဆင်ပေးနေပါပြီ။
ချစ်မိတ်ဆွေတို့ ရဲ့ အိမ်ဂေဟာလေးကိုလှပစေဖို့ CTSM မှ တာဝန်ယူ ပြင်ဆင်ပေးနေပါပြီ။ လူကြီးမင်းတို့၏ AYAR CHANTHA ကွန်ဒို အိမ်လေးလှဖို့အရေး ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရန်ကြွလှမ်းခဲ့ပါ။ 📞-09960182600/ 09960182800 #Blk-7 to -14 Ayar Chantha Executive Condominium ...
နံနက်ချိန်ခါ မင်္ဂလာ အပေါင်းနှင့်ပြည့်စြုံကပါစေ🌤
နံနက်ချိန်ခါ မင်္ဂလာ အပေါင်းနှင့်ပြည့်စြုံကပါစေ🌤 မိမိတို့ရဲ့ အိမ် မှာ ကိုယ်ရေစိတ်ပါ ချမ်းသာ ကျန်းမာစွာဖြင့် တစ်နေ့တာလုံး ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါသည်။ ...
LOTTE Hotel’s poolside Bar offers one of Yangon’s most relaxed outdoor environments,apeaceful spot offering spectacular views across Inya Lake, one can enjoyafull range of quality coffees, cocktails and wines.
LOTTE Hotel’s poolside Bar offers one of Yangon’s most relaxed outdoor environments,apeaceful spot offering spectacular views across Inya Lake, one can enjoyafull range of quality coffees, cocktails and wines. Our poolside BBQ area offersa...
✨Wow 😮 ဘယ်အိမ်ခန်းအကျယ်လေးကိုပြင်ထားပါလိမ့်! လှပတဲ့ အခန်းလေးတွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးဖို့ တာဝန်ယူပါရစေ။ ဒီအိမ်ခန်းလေး တည်ရှိနေတာက✨ Ayar Chantha Executive Condominium✨ -09 960 182 600. / 09 960 182 800 #Blk -7 to 14,Ayar Chantha EC 61 Ward, ...